ရန်ပိုင်| November 6, 2012 | Hits:1
| | MSF အဖွဲ့သည် ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုသမှုများကို အခမဲ့ ပေးနေသော INGO အဖွဲ့ဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ – MSF)
winko November 6, 2012 - 8:11 pm AZG က လူတွေက တစ်ဘက်က အကူအညီတွေပေးနေသလို တစ်ဘက်က လူလိမ်တွေပါ။ အကူအညီတော့မပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ပေးပါတယ် ဒါပေမဲ့ စာရင်တွေဘာဖြစ်လို့ တော်တော်ကြီးကိုလိမ်ကြတာလဲ ကျွန်တော် AZG က ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူခရီးသွားဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော် အေဒီတုန်းက UNHCR က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ သူတို့ ကျွန်တော် ကျောင်းမှာလာပြီးစာရင်းလုပ်ကြပါတယ် အကုန်လုံးအလိမ်တွေ ဆေးဝါးတွေကို သွားပေးတာကနည်းနည်း လိမ်တာကများများ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ရွာတွေမှာ ဥက္ကဌတွေနဲ့ကိုပေါင်းပြီးလိမ်ကြတယ် ဓါတ်ပုံတွေရိုက်တာကနည်းနည်း ကျန်တာအကုန်အလိမ်စာရင်တွေလုပ်ပြီးတင်ကြတယ်။ တချို့ အမှန်အကန်လုပ်တဲ့လူကတော်တော်နည်းပါတယ်။
Reply mr TM November 6, 2012 - 8:45 pm သမတကြီးခင်ဗျား ရခိုင်ပြည်ကိုစစ်တပ်ကထိန်းသိမ်းနေတယ်ဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဆေးကုသ ပေးနေတဲ့ MSF အဖွဲ့ကိုလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းရအောင်ပိတ်ပင်နေတဲ့ရခိုင်တွေကိုဘာကြောင့်မတားဆီးနိုင်ပါသလဲခင် ဗျား။ရခိုင်တွေက OIC ကိုလဲပိတ်တယ်၊ AZG ကိုလဲပိတ်တယ် MSF ကိုလဲပိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုစားဝတ်နေရေးနဲ့ဆေးဝါးကုသရေးကိုအစိုးရကလဲမကူညီ နိုင်ဘူးအပြင်ကလာရောက်ကူညီနေသူတွေကိုလဲပိတ်ပင်နေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသယ်စခန်းမှာ ပိတ်လှောင်ထားပြီးအမျိုးတံုးသတ်ဖြတ်နေတာလား?နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေပါလီ မန်အတွင်းမှာဒစ်ကိုကနေကြသလား?ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကိုစောင့်ရှောက်ရမဲ့တာဝန်မရှိ တော့ဘူးလား။ရခိုင်တွေဒီလောက်မိုက်ရိုင်းယုတ်မာနေတာကိုဘယ်သူမှအရေးယူမဲ့သူမရှိ တော့ဘူလား။ဗုဒ္ဒဘာသာနာမယ်ခံပြီးမိုက်ရိုင်းနေတဲ့ရခိုင်တွေကိုဗုဒ္ဒဘာသာရဟန်းတော် များအနေနဲ့ဆုံးမသင့်ပါပြီလို့ထင်မြင်ပါတယ်၊လူ့အခွင့်ရေးကိုပိတ်ပင်ရင်စော်ကားရင်အော်မှာ ဘဲဆိုတဲ့သူတွေဘယ်ရောက်ကြကုန်ပြီလဲ။သေတဲ့သူတွေလဲသေကုန်ကြပြီကျန်နေသေးတဲ့သူ တွေကိုကယ်ကြပါ၊မေတ္တာတရားထားကြပါ၊ဘေးရန်ကင်းရှင်းအောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို့ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။
Reply Wrongya November 11, 2012 - 8:02 am Who said they are citizen of Myanmar?You should talk to Bangladesh　PM (Sheikh Hasina).　Not to U Thein Sein. Rakhine people have their own right .Only human right for human. Reply pps12345 November 6, 2012 - 11:19 pm ခြိမ်းခြောက်ခံရမှာ ပေါ့ စည်းမှ မထားတာကို
Reply swe htwe November 6, 2012 - 11:41 pm WE HEAR THAT INGOS SUPPORT TERRORISTS BY SOME MEANS.
Reply mg mg November 7, 2012 - 10:21 am လူမျိုးခွဲခြားမှုမရှိဘဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှကန့်ကွက်ကြမှာ
Reply aaa November 7, 2012 - 10:38 am ဘယ်သူမပြုမိမိအမှု ဆိုသလိုပါဘဲ။ နဂိုကတည်းကဒီလူတွေမျှမျှတတလုပ်ခဲ့ရင် ရခိုင်တွေကဒီလိုဆက်ဆံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။
Reply ဂျူလိုင် ရဲရင့် November 7, 2012 - 10:52 am မောင်ရဲကြီးနဲ့အပေါင်းအပါများ
Reply Mg Ye November 11, 2012 - 8:18 am haha,now you are online too.tar tar kyaut kyaut.
Reply zawlinn November 7, 2012 - 12:11 pm အားလုံးကတော့ ကောင်းတာတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြတာပါ….အကောင်းနဲနေတာနော်..၀ိုင်းဝန်း ကူညီပေးလိုက်ရင် ပိုကောင်းမှာပါ…ရိုဟင်ဂျာကိုတော့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး..နဲနဲနေရာပေးရင်…တဖြေးဖြေးဝါးမျိုသွားနိုင်တယ်…တခြားနိုင်ငံတွေမှာ သာဓက တွေအများကြီးနော်…(ဥပမာ..အိန္ဒိယ..ဗုဒ္ဓဘာသာ….ယခု မူစလင်တွေများနေပြီ..)လူမျိုး…ဘာသာ ပျက်သွားနိုင်တယ်…အားလုံးကို(ရိုဟင်ဂျာ)နေရပ်ပြန်ပို့သင့်ပါတယ်။။။
Reply အောင်ဇေယ November 7, 2012 - 12:15 pm ဆရာဝန်တွေ. သူနာပြုတွေကိုတော့ ချမ်းသာပေးပါ
Reply ရခိုင်ဝံသနု November 7, 2012 - 1:54 pm ဘာအဖွဲ့မှအဝင်မခံဘူး
Reply ဗဒင် November 7, 2012 - 2:13 pm သမတကြီးလည်းရှိ့တယ်
Reply Ohmar November 9, 2012 - 3:14 pm comment တော့မေ၇းတက်ဘူး…ကိုဗဒင်၇ဲ့ comment ကိုတော့ အ၇မ်းထောက်ခံတယ်…ဘာကြောင့် မင်းမဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်နေ၇တာလည်းလို့..တကယ်လို့ ဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ကလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို အကြမ်းဖတ်မယ်ဆို၇င် ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ဖြေ၇ှင်းမလည်း…ဒီပြည်နယ်လေးလောက်တောင် ငြိမ်းချမ်းအောင် မဖြေ၇ှင်းနိုင်၇င်… ညဏ်မမှီပါ…မြန်မာပြည် မှ လူကြီး လူကောင်းများ တော်လွန်းတဲ့ ဦးနောက်ကို။
Reply true talker November 7, 2012 - 2:43 pm Now,you know about these Extremely Racist “Mway Pway”,minds. Very rude people with very low minded.Why they did not know these persons are helping to the needed patients.Why they insults and threatened ? Well ,I am not Kalar, nor Yakhine,but, I know that these people are very hard to make friend or to deal.
Reply === November 7, 2012 - 4:48 pm ကုလသမ္မဂ၊ ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီနဲ့ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်တွေကိုတောင် ဒုက္ခပေးတတ်တာ အာဖဂန်နစ္စတန်က တာလီဘန်တွေနဲ့ ဆိုမာလီယာက မွတ်ဆလင်စစ်သွေးကြွတွေပဲ။
Reply mr TM November 7, 2012 - 9:42 pm OIC ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုမှရောက်တာပါ၊လုပ်ငန်းတောင်မစရသေးဘူးခွဲခြားမှုရှိတယ်ဆိုပြီးအ ပိတ်ခံ ရတာပါမွစ္စလင်အဖွဲ့ဖြစ်လို့ပေါ့နော်။အကြောင်အရာတခုနဲသာဓကပြခြင်ရင်အရင်သိအောင် ကြိုးစားပါ…..အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဒဘာသာနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး၊ဟိန္ဒူနဲ့မွစ္စလင်နိုင်ငံပါခရစ်ယာန်ကတတိ ယပါဗုဒ္ဒကလူနဲစုဘဲရှိတာပါ။ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့နေရပ်ပြောပြပါပြန်ပို့ဘို့။AZG ကိုလူလိမ်တွေလို့မပြောခင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ကိုဗဒင်ရဲ့ Comment ကိုထောက်ခံပါတယ်၊
Reply Kyaw Hlwan Moe November 9, 2012 - 3:42 am Biased Writing!
Reply မောင်ကျောက်ခဲ November 9, 2012 - 4:04 pm ရခိုင် အရေး ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်ပေရှည်နေရသလဲ?လူမှု့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ တွေ၊ နိုင်ငံတကာ အထောက်ပံ့တွေ အခုလို အဆက်သွယ်ပြတ်၊ ဘာမှလုပ်လို့ မရပြဲ့ပည်သူတွေဒုက္ခသည်ဘ၀ရောက်နေကြပြီးအခက်တွေံ့နေတာတွေဟာ၊ ကျွန်တော်တို့ အမြင်မှာတော့ အဓိက အကြောင်းတရားကတော့..အစိုးရပဲ။အစိုး၇၇ဲ့ကိုင်တွယ်မှု့ ညံ့ဖျင်းလွန်းအားကြီးလို့။ပြသနာတခု၇ဲ့အတိမ်အနက်ကိုလဲမသိ။စနစ်တကျမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာလဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ဘာ့ကြောင့်မသိရလဲဆိုတော့ တကယ်သိတကယ်တတ်တဲ့ လူတွေက မြောင်းထဲရောက်နေကြရတာ၊ဘာမှမတတ်တဲ့ လူတွေကရာထူးကိုပလူပျံနေတာ။သူတို့ သိတာ လူတစုကောင်းစားဖို့ ပဲ သိတာ၊ပြည်သူဆို တ၇ိ်စ္တာန်သာသာပဲသဘောထားတဲ့သူတွေ။အဲ့တော့ ပြသနာဖြစ်ပြီဆိုရင် သေနတ်မောင်းဆွဲဖို့ ပဲသိတဲ့လူတွေကြီးပဲ ဘယ်လိုဒီပြသနာကအဖြေမှန်ထွတ်လာမှာလဲ။သမ္မတ၇ှိတာမှန်တယ်၊ ပြည်သူပေါ်လဲကောင်း၇ှာပါတယ်။လွှတ်တော်၇ှိတာမှန်တယ်၊လေကန်ပြီးငြင်ခုံတာပဲ၇ှိတယ်ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ စစ်တပ်၇ှိတာမှန်တယ် အထက်ကပစ်ဆိုပစ်ဖို့ပဲသိတယ်…။သမ္မတကြီးကလွဲရင် ကျန်တဲ့ အပိုင်းကလူတွေကစည်းချက်ညီညီမှ မလုပ်နိုင်တာ။ သူတို့ လုပ်ချင်တာလုပ်မယ် ပြည်သူအတွက်က ၁ကျပ် သူ တို့ အတွက်က ၁၀၀။လူတစု ကောင်းစားရေး ဆိုတဲ့ အကျင့် ဟောင်းတွေကလဲ မဖျောက်နိုင်။ လုပ်နေတာတွေကလဲ ဆင်သရေကို ဆိတ်သရေနဲ့ မလုံမလဲ ဖုံးဖိပြီး အတိတ်မှာ မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့ကြတော့ ပြည်သူ့ ကိုလန့်နေကြတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူ့ အရေးဟာ အမြဲတမ်းဘေးမှာပါပဲ…ပြည်သူချမ်းသာမှာ ကောင်းစားမှာအရမ်းစိုးတာ။ပြည်သူနလန်မထူမှ သူတို့ လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုခေါင်းပြန်မော့လို့ ရမှာ။လွှတ်တော်ထဲလဲ နေတိုင်းဆွေးနွေးနေကြတာပဲ ဒါပေမယ့်ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ပြည်သူပိုက်ဆံ နဲ့ထမင်းထိုင်စားပြီး ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာကုန်တာပဲအဖက်တင်တယ်။ လွှတ်တော်အတွင်းမှာတောင် အချင်းချင်းခွက်ခုတ်နေကြတာ ဘယ်ကလာ ပြည်သူ့ အတွက် လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ပေးနိုင်မှာလဲ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ပြည်သူဘက်ကတကယ်ရပ်မယ့်သူက ဘယ်နှယောက်မှမ၇ှိဘူး။လည်ပင်းကြိုးကွင်းရောက်မှာစိုးပြီးပေကန်ပြီး ကန့် လန့် တိုက်နေကြတဲ့ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာကအပြည့်။ အဲ့ဒီတော့အစိုးရက ရခိုင်အရေးကိုလုပ်တော့လုပ်ပေးလိမ့်မယ် ဘယ်တော့လဲတော့မသိ။လွှတ်တော်မှာလဲဆွေနွေးနေတယ် ဘယ်လိုလဲတော့မသိ။ ပြည်သူကလဲစိုး၇ိမ်နေကြတယ် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ။”ဘာ”တွေထပ်ပြီးဘာမှန်းကိုမသေချာတဲ့အနာဂါတ်မှာ ကုလားတွေလဲကြည့်နေကြည့်ထိုင်ကြ။ရခိုင်တွေလဲကြည့်နေကြည့်ထိုင်ကြဖို့ ပဲ အကြံပေးချင်ပါတယ။်ဖြစ်လာရင်တော့ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံပြီးကိုယ့်ကျင်းကိုယ်တူးဖို့ ပဲ၇ှိတယ် အထက်ကိုဘာမှမျှော်မနေကြနဲ့ ။၂ဖက် သတ်ဖြတ်နေကြလ့ို့ ချက်ချင်းကူမယ့်သူလာမယ်မထင်ကြနဲ့ ၊ ချက်ချင်း အမြတ်ထုတ်မယ့်အဖွဲ့တွေပဲလာလိမ့်မယ်။နိုင်ငံေ၇းမှာလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူစားမနာလို၊ငါစားမနာလိုနဲ့အပြီးသတ်ကြတော့မှ ကြားခွေး ၀င်စားမှာလဲ သတိ၇ှိကြပါဗျာ။
Reply မောင်ကျောက်ခဲ November 9, 2012 - 4:22 pm mr Tm ခင်ဗျားပြောသလို ရခိုင်ယုတ်မာတယ်ဆိုတာတော့ အရမ်းများသွားပြီ။တကယ်တော့ ဘင်္ဂလီတွေကသာ ၀မ၇ှိပဲ ၀ိ လုပ်ပြီး စမာန် ထ နေကြတာ ။ တကယ်လို့ ရခိုင်သာ ယုတ်မာရင် ဘင်္ဂလီကုလားတွေ အခုလောက်ဆို အရိုးဆွေးနေလောက်ပြီ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်မိသားစု ကို ထိပါးလာရင် ပြန်ပြီးတုန့် ပြန်မှာပဲ ခင်ဗျားသာ ရခိုင် နေရာမှာဆိုလဲ ဒီလိုပဲဖြစ်မှာ။ ဒါပေမယ့် ကုလားက စလို့ရခိုင်က ပြန်တုန့့် ပြန်တယ်။ဒါကို ယုတ်မာတယ်ပြောရင် ကိုယ့်မျက်ချီး ကိုမမြင်တဲ့ ခင်ဗျားလဲ ဘင်္ဂလီ ဖြစ်နေပြီဆိုတာမှန်းလို့ ရတယ်။ သူများကို ဝေဖန်ထောက်ပြရင် သူတပါးအတွက် စကားအရနဲ့တောင် တဖတ်သတ်ဆန်ဆန် နစ်နာအောင်မပြောရဘူးကွယ့်။မှတ်ထားနော်..ဒါပေမယ့် ငယ်၇ွယ်သူဆိုတော့လဲ ပြောမိတတ်ကြပါတယ်။
Reply သေချာကြည့် November 9, 2012 - 9:59 pm AZG ရဲ့ သရုပ်သကန် အမှန် ကို ဆန်းစစ် အံထုတ်ခြင်း (အပိုင်း တစ်)